Ilaali Gurigaaga / Minnesota.gov
Feature image for Ilaali Gurigaaga
Gurigaagu sida aad u dhici karta waa hantidaada ugu qiimaha badan. Caymisku waxa uu ilaalin karaa fayo qabkaaga dhaqaalexaalada dhacdo aan la saadaalin karin sida guriga oo la jabsado, dab, ama masiibo dabiici ahr.
Xarunta Adegyada Macmiilka
Dib u eeg xeerkaaga si sanadle ah si aad u go’aamiso haddii ay weli ku habboontahay baahiyahaaga. Ma doonaysid inaad ku jirto caymiska la yareeyay dhacdada masiibooyinka, laakiin ma doonaysid inaad bixiso badoolid dheeraad ah oo aad u baahantahay. Sidoo kale waa fikrad fiican in wax la ibsado oo la barbardhigo qiimayaasha shirkadaha kale dhowr sano.
Haddii aanad guri lahayn, ka feker caymiska kiraystaha. Waxaad sidoo kale dooni kartaa inaad gurigaaga ilaaliso gudaha iyo dibada. Iyaddoo ku xidhan baahiyahaaga, waxaa sidoo kale jira noocyo kale oo caymiska ah sida daadka ama caymiska guriga fasaxa kaas oo ilaalin kara hantidaada.